BALLYA BLOG - Andininy momba ny fiarovana ara-tsakafo any an-dàlana sy any ambany
Ahoana ny fomba hanombohana ny famokarana kitapo Covid 19? WhatsApp / WeChat: +86 139 222 97756 Araho ity toro lalana ity, mora ny manangana tsipika famokarana ary manangana ny orinasanao Misy fomba roa hanombohana ny orinasan-tsarimihetsika kitapom-bokatra covid 19. Ny safidy 1 Atao irery ny dingana rehetra.O1. Safidio ny antibodies sy antigén-n'ny SARS-CoV-2 havanana amin'ny famokaranaO2. […]
Ahoana no hizahana toetra an'i Covid 19 any an-trano? Fitsapana iza no mety amin'ny fitsapana kozida 19 an-trano? Fampidirana fohy eto: Momba ny fitsapana faingana an'ny SARS-CoV-2 IgG / IgM Ny fanandramana haingana ny SARS-CoV-2 IgG / IgM dia famoahana sisin-tany izay kasaina hamantarana ny kalitao ary koa ny fanavakavahana ny fiady IgM sy IgG ho an'ny SARS-CoV- 2 amin'ny plasma olombelona avy […]
Febroary 20, 2021
Fampiasana kendrena fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen Saliva Test Ny SARS-CoV-2 Antigen Saliva Test dia ampiasaina amin'ny fitiliana kalitao antigen coronavirus (SARS-CoV-2) amin'ny santionan'ny rora, amin'ny fampiasana diagnostika in vitro ihany. Ireo novakin'ny coronavirus dia an'ny β genus. SARS-CoV-2 dia aretina mamindra taovam-pisefoana. Mora tohina ny olona amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao dia marary ireo marary […]
Fitsapana ara-pitsaboana Covid 19 Antigen
Covid 19 Antigen Test dia haingana kokoa noho ny fitsapana PCR. Fitsapana Covid 19 Antigen tsy mila fitaovana hafa, mora ampiasaina sy miasa. Ny fitsapana dia afaka vita ao anatin'ny 20 minitra.
COVID-19 Antigen Test dia immunoassay mikoriana avy eo ho eo hamantarana ny antigen nukokaridia SARS-CoV-2 amin'ny swab nasopharyngeal sy swab oropharyngeal avy amin'ireo olona ahiahiana ho COVID-19 avy amin'ny mpitsabo azy ireo.
Torohevitra momba ny fitsapana antigen ho an'ny Covid 19
Fampiroboroboana haingana FAMPIANARANA FAMPANDROSOANA FOTOTRA SY FITANDREMANA Components STORAGE SY STABILITY SPECIMEN Sample Collection SPECIMEN PREPARATION TEST PROCEDURE INTERPRETATION OF RESULTS QUALITY CONTROL LIMITATIONS PERFORMANCE CHARACTERISTICS INTENDED CATT CATT CATT CATT CATT CATT CATT CATT CATT CATT CATT CITT Antigen nukleokapsid SARS-CoV-19 amin'ny swab nasopharyngeal sy swab oropharyngeal […]
Enga anie 9, 2020
Fitsapana Coronavirus COVID 19
COVID-19 IgG / IgM Fitsapana haingana ho an'ny fitiliana sy fanaraha-maso feno COVID-19 Coronavirus fanavaozana: 9 Mey 2020 ny tranga coronavirus hatramin'ny tranga 4.01 tapitrisa. Firenena 20 lehibe mipoaka ny valanaretina coronavirus etsy ambany: NO.1 Conronavirus US, tranga 1,321,785 coronavirus 2 […]
Fitsapana ho an'ny Covid 19: Fitsapana Coronavirus VS Covid 19 Fitsapana Antibody ary fitsapana Cognid 19 Antigen
Fanavaozana Coronavirus: misy totalin'ny 3.66 tapitrisa (angona avy amin'ny globalometer corona) olona voan'ny virus ary manamafy fa voan'ny virus coronavirus manerantany. Hitombo isan'andro isan'andro izany, ny isan'ireo maty ny coronavirus 257,301. Ny fomba fitadiavana malaza dia ny fitsapana asidra nukleika, ny faharoa dia covid […]
Famaritana ny vokatra Pipette tip factory fitaovana dia fitaovana fananganana fantsona pipette mandeha ho azy feno novokarin'ny orinasanay ho an'ny mpanjifa indostrialy eo amin'ny sehatry ny siansa fiainana sy ireo mpanamboatra tendron'ny pipette. Izy io dia karazana fitaovana tsy namboarina manokana. Ireo fitaovana dia an'ny famokarana biomedika manan-tsaina. Ho setrin'ny olana maromaro toy ny […]
1 2 3 ... 41 manaraka »